Njikwa nlezianya nke obodo na Publicgbọ njem Ọha na Şanlıurfa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region63 SanliurfaNjikwa nlezianya nke obodo na Publicgbọ njem ọhaneze na Şanlıurfa
25 / 03 / 2020 63 Sanliurfa, Ala nke Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Sanliurfada nwere nlezianya na-ahụ maka njem ụgbọ njem obodo na nke etiti
Ezie na ıanlıurfa ndị isi obodo na-aga n'ihu na -emecha ihe ọcha n'obodo niile, ndị otu ndị uwe ojii nọ n’etiti ndị isi obodo ukwu; oge a mgbe ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ bakụ bakụ na ebe a na-eme achịcha, obodo dị n'ime na etiti
bidoro itinye iwu siri ike na ụgbọ ala ndị njem.
Şanlıurfa Metropolitan Obodo na-arụsi ọrụ ike na ụkpụrụ nke "Ọ dịghị ụjọ, enwere nha" n'ofe obodo ahụ megide Nje Virus Corona (COVID-19). N'otu aka, ndị otu mepere emepe na-eme ihe ndị na-emebi emebi na mpaghara ahụ dum, ebe ndị uwe ojii nọ n’etiti Obodo ukwu na-aga n'ihu na-eme ihe siri ike n'ime mkpebi nke oflọ Ọrụ nke Mịnịstrị na ime ụlọ.
N'ịga n'ihu na ụlọ nri, ụlọ nri na ebe a na-eme achịcha ga na-eme kwa ụbọchị kemgbe ụbọchị ndị gara aga, ndị uwe ojii Metropolitan dọrọ ndị ọkwọ ụgbọala na ụmụ amaala aka na ntị site na ịmepụta ebe ndị na-enyocha ọtụtụ ebe ebe njem siri ike.
METROPOLITAN AJ NOTR POS THBANARA EKPATARA IKPURU AH FORA
Tụle nkọwa niile dị n’obodo, n'okporo ụzọ ma ọ bụ n ’ọdụ ụgbọ ala etiti, dịka njem ọha n’obodo, ụgbọ njem ọha maka mpaghara na ọdụ njem ọha na eze n’obodo, ndị uwe ojii Metropolitan mara ọkwa nke ikpeazụ were ma ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem.
N'ihi nke a, n'ime usoro ndị a, ụdị ụgbọ njem ọha na-ebufe ndị njem ruru ọkara nke ikike ha ugbu a. A ga-eme ihe banyere iwu n'ime usoro iwu maka ụlọ ọrụ na-anaghị agbaso nsogbu ndị a ma ọ bụ maka ndị ọkwọ ụgbọala nke ndị na-anya ụgbọ ala ọha na-adọrọ mmasị ọha na eze.
NSOGBU NIILE: AHA OMUME
Naanị ebumnuche dị na ndị uwe ojii Obodo, nke na-enye ozi gbasara ụmụ amaala banyere ụgbọala n'ụgbọ ala, ka ha wee mee nmụta lekwasịrị anya na ahụike mmadụ n’enyeghị ohere. Na ọkwa nke ndị uwe ojii na-adọ aka na ntị dọọ ndị ọkwọ ụgbọala na ụmụ amaala okwu banyere okwu a, “N'ime usoro a, anyị na-enyocha ụzọ ndị nwere ike itinye ihe ize ndụ ahụike mmadụ nso. Anyị chọrọ ka ụmụ amaala anyị niile na-agbaso iwu ndị a maka onwe ha na ọha. "
Ndị uwe ojii Metropolitan ga-aga n'ihu na-eme ya n'otu ụzọ ahụ na-abịa usoro.
Nnyocha nlezianya nke Ụlọ Akwụkwọ na Ụgbọ njem na Van
Ụzọ Mgbagwoju anya na Dumpster